RASMi: Barcelona Oo Ku Dhawaaqday Inay Ceyrisay Ernesto Valverde Iyo Tababare Cusub Oo La Magacaabay – Kooxda.com
HomeWararka MaantaRASMi: Barcelona Oo Ku Dhawaaqday Inay Ceyrisay Ernesto Valverde Iyo Tababare Cusub Oo La Magacaabay
RASMi: Barcelona Oo Ku Dhawaaqday Inay Ceyrisay Ernesto Valverde Iyo Tababare Cusub Oo La Magacaabay
January 14, 2020 Abdiwali Adan Jamac Wararka Maanta 0
Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay shaqada ka ceyriyeen tababare Ernesto Valverde iyadoo tababare cusub loo magacaabay Quique Setien.
Ernesto Valverde ayaa noqonaya tababarihii ugu horeeyay ee laga ceyriyo shaqada Barcelona xilli ciyaareedka oo socda tan iyo markii 2003dii la ceyriyay Louis van Gaal markaasoo Barcelona ay 20 dhibcood ka dib martay Real Sociedad islamarkaana ay xilli ciyaareedka ku dhameysatay kaalinta lixaad.
Mar sii horeysay maanta ayaa loo sheegay macalinka reer Spain in la kansalay qandaraaskiisii oo dhamaan lahaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana fasax loo siiyay inuu macsalaameeyo shaqaalihiisa iyo ciyaartoyda kooxda oo si weyn u garab taagnaa isaga.
Kulan waqti dheer qaatay oo soo bilowday xalay oo Axad aheyd ayaa ugu danbeyn lagu go’aansaday in shaqada laga ceyriyo tababare Ernesto Valverde.
Valverde ayaa ahaa meyd socda tan iyo markii Barcelona laga soo reebay Spanish Super Cup oo ay guuldarro ka soo gaartay kooxda Atletico Madrid.
Waxaa bedeli doona macalinkii hore ee Real Betis Quique Setien kaasoo qalinka ku duugay heshiis labo sannadood ah.
“Barcelona iyo Quique Setien waxay gaareen heshiis isagoo noqonaya tababaraha cusub ee kooxda koowaad ilaa iyo xagaaga 2022” ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay Barcelona oo la soo dhigay website-kooda.
Markii ugu horeysay ee uu tababare ka noqdo horyaalka La Liga waxay aheyd sannadkii 2015 markaasoo uu tababare u noqday Las Palmas isagoo labo sannadood ka dib noqday tababaraha kooxda Real Betis.
Xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay ee Real Betis waxa uu u soo saaray Europa League waxaana uu gaarsiiyay semi-finalka Copa del Rey, xilli ciyaareedkiisii labaad waxaa xumaaday xiriirka u dhaxeeyay isaga iyo maamulka waxaana la kansalay qandaraaskiisa inkastoo uu saxiixay heshiis seddex sannadood ah.
Quique Setien waa nin jecel inuu ciyaar kubada ay Barcelona caanka ku tahay ee Tiki-taka waxaana uu sheegay inuu sii wadi doono falsafada kooxda.
Maxuu Ku Fiican Yahay Kuna Liitaa Tababaraha Lala Xariirinayo Barcelona Ee Quique Setien, Shaxdiisa Iyo Saaxibada Uu Camp Nou Ku Leeyahay
Tababaraha Cusub Ee Barcelona Quique Setien Oo Haatanba Badalka Suarez Doortay, Horyaalka La Liga Dhexdiisa Ayuu Ka Helay.